Abakhiqizi nabaphakeli be-china cast iron Flush joint reinforced solid mold mold Ukubhukuda
Sakaza insimbi Flush ngokuhlanganyela iqinise ukhonkolo ipayipi isikhunta pallet
Ukhonkolo wepayipi lesikhunta / isikhunta sendandatho engezansi / ithreyi engezansi / iphalethi engezansi, kuyizinto zokuphoqelela okuyisibopho ngenkathi kukhiqizwa ipayipi likakhonkolo / usimende. Isetshenziselwa ukuxhasa / ukuphakamisa ikheji lokuqinisa, isikhunta sangaphandle sepayipi, nazo zonke izinto zikakhonkolo ngesikhathi sokukhiqiza ipayipi, ngakho-ke iringi engezansi / ithreyi eliphansi / amaphalethi aphansi kumele aqine ngokwanele futhi angagqoki. Ngemuva kokuphothula ukukhiqizwa kwepayipi, ama-pallets aphansi / iringi engezansi / ithreyi engezansi isazogcina isekela ipayipi le-konkre / usimende eliqinisiwe kuze kube yilapho ipayipi selilapheke ngokuphelele, bese kuthi amaphalethi / iringi / ithreyi lehliswe futhi lizophinda lisetshenziswe ekusetshenzisweni kabusha okulandelayo.
Iringi / ama-pallets / ugqoko wangaphansi wenziwe ngensimbi yensimbi, i-ductile iron, noma yenziwa ngeshidi lensimbi yensimbi ngokushaya ngenqubo / inqubo yokugcizelela / inqubo yokushaya isitampu.
Inkampani yethu inamakhono kakhulu futhi inolwazi lokukhiqiza ukhonkolo wepayipi lesikhunta sepayipi / iringi engezansi / ugqoko ongezansi iminyaka engaphezu kwengu-6. Senze ngaphezu kwama-7000pcs wama-pallets aphansi ahlanganisa ububanzi besayizi kusuka ku-300mm kuye ku-2100mm kumakhasimende ethu aphesheya kwezilwandle.
225mm kuya ku-2100mm
7kgs kuya ku-400kgs
Isithombe sepayipi elihlangene lendandatho ekhiqizwayo elenziwe ngamaphilisi ka-FJ
Langaphambilini insizakalo yemikhiqizo yensimbi ye-ductile
Olandelayo: Sakaza insimbi yenjoloba iringi ngokuhlanganyela iqinise ukhonkolo ipayipi isikhunta pallet